War Murugu Ah: Sergio Aguero Oo Iskaga Fadhiisanaya Ciyaaraha Kubada Cagta Caalamka
HomeWararka CiyaarahaWar Murugu Ah: Sergio Aguero oo iskaga fadhiisanaya Ciyaaraha Kubada Cagta Caalamka
November 21, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Sergio Aguero ayaa lagu soo waramayaa in uu ku qasbanaaday in uu isaga fariisto ciyaaraha kadib xanuun dhanka wadnaha ah.
Laacibka reer Argentine ayaa xanuun feedhaha ah iyo neefta ku dhegtay ciyaartii ay kooxdiisu la ciyaartay Alaves bishii hore, waxaana markii hore la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono muddo saddex bilood ah ka dib baadhitaano wadne ah.
Aguero ayaa la rumeysan waayay inuu ku fikirayo inuu ka fariisto ciyaaraha xirfadle ahaan, laakiin weeraryahankii hore ee Manchester City ayaa u muuqda mid lagu qasbay inuu kabihiisa xirto sababo la xiriira caafimaadkiisa.
Sida laga soo xigtay saxafiga Gerard Romero , Aguero ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa shaqada ka fariisashadiisa usbuuca soo socda, isagoo ku soo qoray Twitter : “Kun Aguero wuu ka fariistay ciyaaraha. Dhibaatooyinka wadnaha ayaa ku qasbaya inuu ka tago kubada cagta. Isbuuca soo socda ayaa loo qorsheeyay shir jaraa’id inuu ku dhawaaqo ka bixistiisa.”
Aguero ayaa kaliya shan jeer u saftay tartamada oo dhan Barcelona sababtoo ah dhaawac kubka hore kasoo gaaray, waxaana uu qarka u saaran yahay inuu ciyaaraha ka fariisto isagoo kaliya hal gool u dhaliyay Blaugrana kulankii El Clasico.
33-sano jirkaan ayaa ka tagay Manchester City isagoo ah gooldhaliyahooda abid ugu goolasha badan isagoo dhaliyay 260 gool 390 kulan oo uu ciyaaray, isagoo sidoo kale ku faanay 41 gool 101 kulan oo uu u saftay xulka qaranka Argentina.